မကျြနှာကိုမုန့် - ညဥ့်နေ့, အသားအရေစိုပြေ, အာဟာရ, Anti-အိုမင်း
မကျြနှာကိုမုန့် - အားလုံးအသားအရေအမျိုးအစားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု
မျက်နှာ Cream - ဤလူငယ်များနှင့်အလှအပများအတွက်ရုန်းကန်အတွင်းအမျိုးသမီးများ၏အဓိကတူရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မျှတသောလိင်ဆက်ဆံမှုသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသိပ်အာရုံကိုပေးဆောင်နေကြသည်။ စနစ်တကျအရေပြား Moisturizing မရွေး, ကအဟာရဖြည်နှင့်အခြားအလှကုန်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးအတွက်ကူညီပေးသည်။ ထိုထုတ်ကုန်များ၏ဈေးကွက်အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။
မျက်နှာကို cream ကိုများအတွက်ဖွဲ့စည်းမှု
အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ၎င်း၏တံဆိပ်ဆန်းစစ်ရန်သေချာစေပါ။ အသေးစိတ်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုခြယ်။ သဘာဝကစက်ရုံဆီ၏အခြေခံအရည်အသွေးမုန့်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အကောင်းဆုံး option ကိုသံလွင်နှင့်နှမ်းဆင်ခြင်၏။ မသမာထုတ်လုပ်သူရေနံသန့်စင်နေစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်ခြေရင်းဓာတ်သတ္တုစားသုံးဆီအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင်မျက်နှာများအတွက်မုန့်အတွက်အမြဲတမ်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ element တွေကိုတင်ပြကြပါတယ်။ အရေပြားနှစ်ဦးစလုံးဘေးအန္တရာယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အာဟာရကာကွယ်ပေးသည်တဲ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ယင်းမုန့်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ့ကျော် 1% ကစုပ်ယူမျှနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်လျှင်။ ဒြပ်အညစ်အကြေးဟာပိုမိုနက်ရှိုင်းအသားအရေအလွှာများနှင့် 20% သို့အခြေခံတ္ထုများ၏ထိုးဖောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါး။ အသုံးအများဆုံးအလှကုန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်ကိုသုံးပါ:
ကြာရှည်ခံ - တစ်ဦးမုန့်အတွက်လက်ဆောင်သဘာဝအစိတ်အပိုင်းများကိုလုယူသောဥစ္စာကိုမပေးပါဘူး,
တည်ငြိမ်မှုနှင့် emulsifiers - ယူနီဖောင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်;
အနံ့အရသာအေးဂျင့် - အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များဗေဒဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးမြှင့်;
thickened - ကျွန်တော်တစ်ဦးမျက်နှာမုန့်သင့်လျော်ကိုက်ညီမှုပေးရနျလိုအပျ;
ဆိုးဆေးများ - အခြို့သေံနည်းလမ်းပေးပါ။
ယင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုထဲတွင်မျက်နှာအဘို့မုန့်တက်ကြွစွာနှင့် psevdoaktivnye အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါတ္ထုများကိုပထမဦးဆုံးအဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်:
မကျြနှာကိုမုန့် psevdoaktivnye ပစ္စည်းဥစ္စာပါဝင်နိုင်သည်။ မည်သည့်အရေးအကြောင်းတွေပန်းခင်းလမ်းနေတယ်ဆိုရင်, အလှကုန်၏သေံညှိပြီး။ သို့သော်ဤအစိတ်အပိုင်းများကိုအရေပြားသို့စုပ်ယူမထားပေ။ အများစုကတော့ထိုကဲ့သို့သောတ္ထုများ psevdoaktivnye အသုံးပြုသော:
Coenzyme Q ကို (ကကြီးမားလွန်းမော်လီကျူးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အရေပြားကိုအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ဘူး) ။
ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းသင့်လျော်သော rejuvenation ဂုဏ်သတ္တိများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆိုပါကတစ်ငြိမ်သက်ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ညဥ့်အဘို့အရည်အသွေးမြင့်မုန့်ကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများရှိစေခြင်းငှါ:
ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ (Oat, ရှားစောင်းလက်ပတ်);
အဆီများ (နှမ်း, Shea ထောပတ်, argan);
ဗီတာမင် (အီး, တစ်ဦးက, C, 5);
ဒါကြောင့်အပေါ် elastin နှင့်။
နေ့ Face Cream
ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ယခုနှစ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ နေ့ Cream အောက်ပါမစ်ရှင်ရှိပါတယ်:
(ကနုပျိုကြည့်နှင့်ကျန်းမာရေး glows) မျက်နှာအသွင်အပြင်၏အသွင်အပြင်သက်ရောက်သည်။
မျက်နှာကိုအဘို့နေ့ရက်ကိုမုန့်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် - အသားအရေအသားအရေစိုပြေစေ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်း၏ texture ထုတ်ကုန်၏ညဥ့်ကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အရည်အသွေးနေ့စဉ်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် 80% ခန့်ကိုရေများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်စင်ဒီနေရာမှာလက်ရှိဖြစ်နိုင်သည်:
hyaluronic acid ကို ;
ဗီတာမင် A, E နဲ့, C နဲ့ F ကို;
oleic နှင့် linoleic acid ကို။
သဘာဝအတ္ထုများ၏ဝေစု - ထိုပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းရှိရာသူတို့ကစာရင်း၏ပထမတစ်ဝက်၌ရှိကြ၏အလှကုန်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, ။ ထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုထက်နည်းသုံးထိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုမဖွစျသငျ့သညျ။
မုန့်ကိုက်ညီရမယ် သင့်ရဲ့အသားအရေအမျိုးအစား ။
ကွန်တိန်နာတွင်ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့တံဆိပ်ဖြစ်ရမည်။ ကမလျှင်, ထုတ်ကုန်မေးခွန်းထုတ်စရာအရည်အသွေးသောမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
အတူအရေပြားအပေါ်ယံဤအမျိုးအစားကမ္ဘာဂြိုဟ်၌ရှိသမျှသောမြို့သားတွေအကြောင်း 10% နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤပြဿနာကိုအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်:
ဤအကြောင်းကြောင့်, အဆီပြန်အသားအရေများအတွက်မုန့်စနစ်တကျရွေးချယ်သင့်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်အခြေအနေကပိုမိုဆိုးရွားစေမည်။ ထိုနေ့၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုလိုသည် - သူတစ်နေ့တာ၏ဤအချိန်တွင်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်သောကဖိစီးမှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများမှအရေပြားအပေါ်ယံပြင်ဆင်လော့။ ညဥ့်မုန့်ကိုမကြာခဏ anti-inflammatory product အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မုန့်အဆီပြန်အသားအရေအမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မျက်နှာကိုင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုသေချာပါစေ။ ဒီထုတ်ကုန်အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်:
ဖိန်း - ဒီဥစ္စာဟာကျယ်ဝန်းအပေါက်ကျဉ်းမြောင်း;
salicylic acid - တစ်ခြောက်သွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးရွေးချယ်ရေးအရေပြားအောက်ဆုံးအဆီပုံမှန်;
benzoyl peroxide - တိုက်ပွဲတွေရောင်ရမ်းခြင်း,
မွှေးကြိုင်ရေနံ - antibacterial အကျိုးသက်ရောက်မှုအားအပိုင်;
Niacinamide - ထိုယားယံဖယ်ရှားပေး;
ဆေးဖက်ဝင်အပင်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ - စိတ်ဆိုးအသားအရေပေါ်မှာငြိမ်သက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် ဖြစ်. ,
ဆာလဖာနှင့်အတူ retinol - ဝက်ခြံနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြ;
ဗီတာမင် - အရေပြားအာဟာရ။
ရဲရင့်အမျိုးအစား epidermal များအတွက်အလှကုန်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါကျိန်းသေဒီထုတ်ကုန်အထူးသကိုသူ့အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးတံဆိပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်လည်းမရှိ - ကထုတ်ကုန်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်:
အကြံပြုနွေရာသီတစ်ဦးအလင်း texture (emulsion သို့မဟုတ်သွေးရည်ကြည်) နဲ့ကိုဆိုလိုသည်။
ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာအဘို့မုန့်, အာဟာရနှင့်အတူအရေပြားအပေါ်ယံဖြည့်ပါ moisturize နှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို restore မှတတ်နိုင်သမျှသင့်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများအလှကုန်များတွင်လက်ရှိရှိရာအသားအရေများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်:
Panthenol - မျက်နှာပြင်မှာပျက်စီးသွားသောဝေမျှပြုပြင်နှင့်ရေငွေ့ပျံကာကွယ်အကာအကွယ်အတားအဆီးဖန်တီး;
က glycerol - ဆဲလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူခွင့်ပြု;
elastin နှင့်ကော်လာဂျင် - ဤတ္ထုများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ, နှင့်အထက်အတွက် - Anti-အိုမင်းသက်ရောက်မှုရှိသည် ဖြစ်. ,
သဘာဝအဆီ - ဆဲလ်တန်ဖိုးရှိသောတ္ထုများနှင့်အတူပြည့်နှက်များနှင့်အသားအရေပျော့နှင့် velvety လုပ်;
ဗီတာမင် - ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဆဲလ်တွေအားကောင်းလာစေရန်။
သို့သော်ခြောက်သွေ့အသားအရေအမျိုးအစားနှင့် "ရန်သူများကို" အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်: အလှကုန်များတွင်၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်သာအရေပြားအပေါ်ယံ၏အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်။ မကျြနှာကိုမုန့်ကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများကိုမဆံ့မခံသငျ့သညျ:
salicylic acid ။
အဆိုပါအရေပြားအပေါ်ယံ၏ဤအမျိုးအစားအလွန် capricious ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောလက္ခဏာတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်:
ဒါဟာ matting အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်;
glycolic acid ကို ;
ဗီတာမင်အီး, C နှင့်တစ်ဦး,
ဒါကြောင့်အပေါ် hyaluronic acid နှင့်။
မျက်နှာမုန့်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ, သင်အသားအရေရဲ့ features တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ restore ပြန်ဖုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို - ထိုအရေပြားအပေါ်ယံ၏ခြောက်သွေ့အမျိုးအစားများအတွက်ပြင်းထန်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့အစာအာဟာရအရေးကြီးသောနှင့်အဆီအဘို့ဖြစ်၏။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန်ပျော့ပျောင်းသောအလင်း texture ဖြစ်သင့်သည်။ ယင်းမုန့်များ၏ရွေးချယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ရာသီယူပြီးထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဆီဖုံးအမျိုးအစားနွေရာသီအတွက်အခြောက်လှန်းတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အလင်း moisturizers အရေပြားစိုအပူများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အလှကုန်ဈေးကွက်အသားအရေများအတွက်ဂရုစိုက်ဖို့နည်းလမ်းမှာများစွာသောအမျိုးမျိုးကိုယ်စားပြုသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအများဆုံးတောင်းဆိုထုတ်ကုန်ကူညီပေးသည်ဘယ်အရာကိုမကျြနှာကိုမုန့်ဆုံးဖြတ်ပါ။ အတော်ကြာထိပ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအောက်ပါအချက်များကဖွဲ့စည်းထားပါသည်:
အားလုံးအသားအရေအမျိုးအစားများအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့ငြိမ်းစေလျက်အစိုဓာတ်။ ဒီထုတ်ကုန်ဟာအရေပြားအပေါ်ယံများ၏လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်အခြေခံနေသူများကဖန်တီး။ Cosmetologists အကောင်းဆုံးကိုမကျြနှာကိုမုန့်ကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားရာထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များ၏စံနှုန်း, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည် TOP အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ကိုယ်စားပြုထားသည်:
Mirra အားဖြင့် "Express ကိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့" gel;
Geltek ၏ hyaluronic မုန့်,
အစိမ်းရောင် Mama ကနေ "ဗိုင်နှင့်အ Marshmallow" moisturizer;
Nivea စောင့်ရှောက်မှုကနေ Shea ထောပတ်နှင့်အတူမုန့်,
Lumene ထံမှအဆီပြန်အသားအရေများအတွက် moisturizer;
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ Derm ထံမှ camelina ရေနံကိုဆိုလို;
chamomile ထုတ်ယူနှငျ့ "သန့်ရှင်းလိုင်း" မှခုနစျပါးအဆီများနှင့်အတူထုတ်ကုန်။
ထိုသို့သောအလှကုန်ပစ္စည်း tools တွေကိုလျင်မြန်စွာ beriberi ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ အဆင့်အောက်ပါထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းသည်:
Darphin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုချောမွေ့နှင့်အတူ Fibrogebene မုန့်,
နက်ရှိုင်းတဲ့အစာအာဟာရပြင်းထန်သော Rich မှပြန်လည်ထူထောင်ဘို့ဆိုသည်,
NNPTSTO အားဖြင့်အဆီမုန့် "အလှကုန်ပစ္စည်းမုန့်";
အဆိုပါ Vichy ထံမှ Nutriogie1 ထုတ်ကုန်;
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလြော့ပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ထုတ်ကုန်စေ။ အောက်ပါအဆင့်ကိုတက်ခူးကူညီပေးဖို့ A ကောင်းဆုံးမျက်နှာမုန့်:
ဗီတာမင် C နှင့်ကီဝီတစ်ခုထုတ်ယူ်သွေးရည်ကြည် Biotherm အဖြူရောင် detox,
Clinique တောင်မှ သာ. ကောင်း၏လက်တွေ့အမှောင်ပြောက် Corrector အစိတ်အပိုင်း CL302 နှင့်အတူဆိုသည်,
Vichy ထံမှ Idealia PRO မုန့်,
Yves Rocher ADN ဆိုသည်,
whitening ထုတ်ကုန် Orquid Garnier ကနေအရေးပါ။
facial Anti-အိုမင်းခြင်းဟာ Cream
Anti-အိုမင်းလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ကိုကူညီအသားအရေကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ Restore ။ Anti-အိုမင်းလိမ်းဆေး rating ထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းသည်:
intensive ပြန်လည်တည်ထောင် Moisturiser တို့ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆေးညွှန်း;
အမှတ်တံဆိပ် Lancome ကနေဆုံးဖြတ်ချက် D-Contraxol ဆိုသည်,
Nux ဖွငျ့မကျြနှာကိုမုန့်ဆန့်ကျင်ရှုံ့ Nuxellence Jeunesse;
Rich ထံမှကုန်ပစ္စည်း Payot AOX;
anti-အိုမင်းခြင်းဟာ Hydra အလှအပCrèmeအမှတ်တံဆိပ် Chanel;
ထုတ်ကုန် Vichy Idealia ။
အောက်ပါအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များတွင်ပါရှိသော ana နှင့် BHA အက်ဆစ်:
တစ်ဦး Peeling အကျိုးသက်ရောက်မှု Gemene ဆိုသည်,
hyaluronic acid ကို D'oliva နှင့်အတူမျက်နှာမုန့်,
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် Librederm ၏သွေးရည်ကြည်-Active;
Vichy ထံမှ Liftaktiv Retinol;
salicylic မုန့် Stopproblem;
သင်၏မျက်နှာကိုညာဘက်အပေါ် cream ကိုလျှောက်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များကိုသာအသားအရေ၏ပြင်ဆင်မှုပြီးနောက်အသုံးပြုရပါမည်။ ဒါဟာမိတ်ကပ် remover လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်မျက်နှာလုပ်သူများသုတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ညဥ့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီ 1.5-2 နာရီများအတွက်အရေပြားအပေါ်ယံအဖုံးကိုဆိုလိုတယ်, နေ့ - တစ်နာရီပြင်ပတွင်သွားမီ။
နေရောင်ကာကွယ်ဆေး - ညာဘက်ရန်ပုံငွေများရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်အရာကို BB Cream CC ကို-cream ကိုခွဲခြား?
အဘယ်ကြောင့် Bloom စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နဲ့အသီးကိုသီးသည်မဟုတ်လော
လန်ကာဝီ Cable ကိုမော်တော်ကား
သေးသေးလေး Pinscher - မွေးမြူရေးဖော်ပြချက်
ယင်းပြတင်းပေါ် parsley - ဘယ်လောက်ကြီးထွားဖို့?
Peonies - အချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ပြင်ဆင်
Theresa မေလမျက်နှာဖုံး-မိန်းကလေး Vogue အမေရိကန်ထုတ်ဝေဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ကျေးလက်အိမ်၏ဒီဇိုင်း - သင့်အားလပ်ရက်အိမ်ပြန်ဒီဇိုင်းဖို့ဘယ်လို?
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ Mayonnaise နှင့်အတူမုန်လာဥ
Calendula ရေနံ - အသုံးပြုမှု